खुसीको खबर, रंगशाला निर्माणमा विनोद चौधरीले गर्दैछन यस्तो कार्य ! – Todays Nepal
खुसीको खबर, रंगशाला निर्माणमा विनोद चौधरीले गर्दैछन यस्तो कार्य !
नेपालमा अत्याधुनिक खेल मैदान निर्माणमा नेपालका अर्बपति विनोद चौधरीले चाँसो दिएका छन् । नेपाली क्रिकेट टोलीले एकदिवशीय क्रिकेट मान्यता पाएसँगै क्रिकेट रंगशाला निर्माणको आवाज व्यापक रुपमा उठिरहेको छ ।
म अरुजस्तो खाली सिसी,पुरानो कागजवाला मधेशी होइन : हृदयेश त्रिपाठी